မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရေးသူအတွေး ဖတ်သူအမြင် | အံ့ဘုန်းမြတ်
Posted by ahuntphonemyat ⋅ September 30, 2009	⋅ 1 Comment
ကျွန်တော်ဘလော့ခ်မှာ တင်ခဲ့တဲ့ ( လတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါး များအပေါ် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းအမြင်ကို သည်ဗွီုက်ဂျာနယ် ပြန်လည်တုန်ပြန်ခြင်း) ဆောင်း ပါးပေါ်မှာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေက သူတို့အမြင်တွေကို လွတ်လပ်စွာနဲ့ ဆွေးနွေးလာကြတဲ့ စာတွေကို အခြား စာဖတ်ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့လည်း ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပိုစ်တစ်ခု အဖြစ်ပြန်တင်ပေး လိုက်ရပါတယ်။ သူတို့တွေ ရေးသားလာကြတဲ့ထဲမှာ လတ်တလော ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရေးပြဿနာတွေအပေါ် ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမြင်တွေ ဘယ်လောက်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကို ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင် ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ဘာခေတ်နဲ့ အစိုးရရဲ့ တပြေးညီမဟုတ်တဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် စာရေးသားပို့လာသူတွေ အမည်မှန်နဲ့ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံစိတ် အပြည့်အ၀မရှိကြပေမယ့် သူတို့ ရေးသားထားတဲ့ စာတွေမှာ ဘယ်လောက် နိုင်ငံသားကောင်း စိတ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ အောက်ပါအတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အယူအဆနဲ့ ဆန်ကျင့်ဘက် အယူအဆနဲ့ အမြင်တွေ ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်လည် ရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ၊ လွှတ်တော်၊ ပါတီလူတန်းစား စတဲ့အရာတွေနဲ့ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီလူ့ဘောင်သစ်တစ်ရပ်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ တပြေးညီမဟုတ်တဲ့ မူဝါဒတွေကြောင့် လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ကို ဆိုက်ဘာခေတ်ရဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
lady philosopher September 23, 2009 at 8:09 am
“နိုင်ငံသားများသည် ၎င်းင်းတို့နှင့်ထိုက်တန်သော နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ရကြခြင်းဖြစ်သည် ဆိုသောအချက်မှာ တစ်နည်း အားဖြင့် Civilization ၏အတိုင်းအဆသည် ရရှိမည့် ဒီမိုကရေစီ၏အတိုင်းအဆသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။” လို့ The Voice ကဆိုပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ရင်ခံယူချက်မယ်မယ်ရရမရှိတဲ့ နိုင်ရေးသမားတစ်ဦးရဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်သလို ဖြစ်သမျှအကောင်းပဲလို့ တွေးနေ တတ်တဲ့ခံယူချက်ပီပီပြင်ပြင်မရှိတဲ့ ယောင်ဝါးဝါးလူတွေရဲ့ အတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ပါ။
လူသားတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကံကြမာကို ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ရရမှာပါ။ ကိုယ့်ကံကြမာကို ကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖန်တီးမရတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ 1962 မှာ ဦးနေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တာခံရပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဟာ မျက်စိကိုအတင်းပိတ်ခံထာရတဲ့ လူတွေလိုဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ 1988 မှာ ဘယ်သူမမဖိတ်ခေါ်ပဲတက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရကလည်း မြန်မာပြည်သူတွေကို မျက်စိပါ မက နား ပါးစပ် အကုန်ပိတ်ထားပြီးပါပြီ။ ကိုယ့်ကံကြမာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်မရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ စစ်ဘိနပ်အောက်ဓှာပဲ ပြားပြားဝပ်နေပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုယ်လိုတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ကိုယ်ကိုတိုင်ဖန်တီးခွင့်ရရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အိမ်မက်ပါ။
စစ်အစိုးရတင်ပေးမဲ့ ရုပ်သေးအစိုးကို ဘယ်ပြည်သူကမှ မလိုလားပါဘူး။ ကြောက်လို့လက်မခံချင်ဘဲ လက်ခံလိုက်ရရင် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဦးမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ စစ်တပ်ကမလွဲမရှောင်လို့ပါဆိုတဲ့ ဆင်ခြေပေးဦးမှာပါပဲ။ ဒါကသူတို့ရဲ့မရိုးနိုင်တဲ့ဗျူဟာပါ။ ဒီလိုနဲ့ သူတိုရဲ့စစ်မျိုးစစ်နွယ်တွေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ကနေ ဆင်းပေးမှာ မဟုတ်ပဲ အာဏာမြဲနေဦးမှာပါ။ ယခုရွေးကောက်ပွဲဟာ စစ်မှန်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟုတ်ပါရဲ့လား စဉ်းစာစရာပါ။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် အတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ဆိုတာ မေ့ပြစ်လို့မရပါဘူး။ အတိတ်ကာလက သူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အရာက သူ့နောက်ကိုအမြဲလိုက်နေမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ကောင်းလားဆိုးလားဆိုတာ သူ့ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းနဲ့ သူမျက်မှောက်ဘ၀မှာ လုပ်နေတဲ့ အခြေအနေအပေါ်ကို ဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာလေ။ အနာဂတ်လှစေချင်ရင် အတိတ်က မကောင်းတာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကိုမှန်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပါပဲ။ လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အညတရ အစိုးရ၀န်ထမ်းဟောင်းတစ်ဦး September 28, 2009 at 12:19 pm
မြန်မာစာနှင့် မြန်မာစကားသည် မြန်မာများကိုယ်တိုင်ပင်နားလည်ရန်ခက်ခဲလှပါသည်။ အဓိပါယ်နှစ်ခွ၊ သုံးခွစသည်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေသောဝေါဟာရများရှိကြပါသည်၊ သည်နေရာတွင် * သူတို့* ဆိုသောဝေါဟာရ၏ အဓိပါယ်မှာလည်း မိမိနှင့် အယူအဆ သဘောထားမကိုက်ညီသူများကိုဖော်ညွှန်းသကဲ့သို့ မိမိမှတပါး အခြားသူများကိုပြောဆိုရေးသားရာတွင် လည်းသုံးစွဲလေ့ရှိကြပါသည်။
သတင်းစာဆရာကြီးနှင့် DVB တို့၏ Interview ကိုလေ့လာရတွင် The Voice Weekly ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဦးသန့်မြင့်ဦးနှင့် မစွတာဂျင်ဝတ်တို့ကို လည်းကောင်းထိုက်ခိုက်စွတ်စွဲသည့် အဓိပါယ်ပေါ်လွင်မှု မရှိဟုယူဆပါသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ်သည့် media အတော်များများတွင်မှု သတင်းစာဆရာကြီးပြောကြားသကဲ့သို့ရေးသားထုတ်လွင့် တင်ပြချက် များကို တွေရှိနေရသည်မှာငြင်းကွယ်ရ်ျ မရနိုင်ပေ။ ယင်းပုဂိုလ်များကိုသာ သတင်းစာဆရာကြီးရည်ညွှန်းဟန်ရှိပါသည်။
မြန်မာစာနှင့် မြန်မာစကား၏ အနက်အဓိပါယ်ကိုလည်းသဘောပေါက်သင့်ပါသည်။ ရိုးစင်းသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု၊ ပြောဆိုရေးသားမှုတစ်ခုအား မိမိလိုရာဆွဲယူ ပုံဖော်ရန်မသင့်ဟု ယူဆပါသည်။ အကယ်ရ်ျ လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုပုံဖော်မှု များရှိနေပါက…. the voice weekly သည်လည်းတစ်စုံတစ်ရာသောပယောဂများ ပူးကပ်နေသည်ဟု ယူဆရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« လတ်တလော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးများအပေါ် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းအမြင်ကို သည်ဗွီုက်ဂျာနယ် ပြန်လည်တုန်ပြန်ခြင်း
NLD ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥဏ်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း »
One thought on “မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ရေးသူအတွေး ဖတ်သူအမြင်”
you can ask the voice wheither killing monks on the streets in democracy or civilizations
using law as they wish is democracy not allowing peaceful demonstration is civilization?
ask them openly they can sue monks using fair law if the monks break the law no need to shoot.
Posted by READER | October 1, 2009, 7:40 am LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...